Abalimi abaningi bacabanga benza lutho ngaphezulu kuyadingeka emva kokutshala utshani, kodwa akuyona. Svezheposazhennaya utshani kudinga yesondlo ngokucophelela. Ukuze ebusweni utshani ine ezikhangayo ukubukeka, utshani kumele ngezikhathi ukusika. Ungenantambo imithi utshani - lokhu iyithuluzi omkhulu kulabo abafuna ukufeza imiphumela ekahle ekwelapheni izitshalo. Ngakho, ake sibheke kabanzi ukuthi kudivayisi enikeziwe.
Kuze kube manje, ngisho wotshani eziphambili kakhulu akakwazi usike ngokunembile yonke indawo, njengoba esendleleni kunezithiyo ahlukahlukene ngesimo eziseceleni ukhonkolo, amatshe zokuhlobisa nokunye. Ezindaweni ezifana ukusebenza wotshani kuyingozi kakhulu, njengoba kukhona ingozi lokulimala metal izindwani, okuyizinto ngenhlanhla imali eningi. Kodwa abantu ithole indlela yokuphuma kulesi simo ngokwakha izindawo ezikhethekile ukusika utshani ku ibhethri, okuyinto ngokunembile yakhelwe ukusebenza kanzima ukuze afinyelele izindawo. Ngokungafani lawnmower besiyoba sikhulu amadivayisi isakhiwo engasindi futhi esinokwethenjelwa eduze ukhonkolo izisekelo.
Scissors ukusika isitoreji utshani iyithuluzi ezibumbeke njengebholo Clipper izinwele. Ukuhlanganiswa kuphela khona izindwani metallic ukuthi kukhona ukuhluka ngosayizi. umklamo wabo jikelele. Ngaphansi kwalo isici kwakusho ukuthi utshani imithi ibhethri abakwazi kuphela masinya sika utshani, kodwa futhi "ibhulashi" yakhe noma ukunciphisa abasha neziqu zezitshalo.
Kunezinhlobo eziningi sikelo, okuyinto zingafani izici zabo zokusebenzela. Ngokuvamile, zesimanje ezenza onobuhle babe amabhethri eziyisithupha, okuyinto evumela ngokushelela utshani imizuzu 50-70. Kepha voltage, kukhona izinkomba ezimbalwa kuhluke: ezinye onobuhle abe ibhethri nge 3.6 Volt, nabanye - kokuphelele 7.
Scissors ukusika utshani accumulator: ngobuhle nangobubi bawo
Lapho ekhetha mishini kufanele kukhunjulwe ukuthi ngemodeli ngayinye has ubuhle nobubi bayo. Ngakho, ake udlulela izinzuzo. Amathuluzi anjalo kukhona nenjini enamandla kakhulu ivumela wonke umsebenzi horticultural kumaminithi ukuthi. Lesi sici abakwazi ukuqhosha nozakwabo lokukhanda. Ngenxa permeability yaso ephezulu, angasetshenziswa cishe kunoma iyiphi indawo, okuyinto inzuzo ngoba Electroscissors. Ngaphezu kwalokho, wonke amamodeli ungenantambo kungenziwa ifakwe inkinobho ekhethekile yokuvala, ngaleyo ndlela sigweme kungenzeka okungagunyaziwe idivayisi uqalisa.
The main kanye kuphela ezimbi lezi sikelo - kuba isisindo sayo esinzima esibangela ukukhathala izandla emva imizuzu yokuqala umsebenzi. Ngakho-ke, uma unquma ukuthenga isikelo ukusika isitoreji utshani, silalela iqiniso lokuthi isisindo yomculo njengoba encane ngangokunokwenzeka.
Zibe utero: izizathu kunokwenzeka, incazelo kanye ikakhulukazi ekwelapheni
I-nasturtium enhle - ekhula ekhaya
Amorphous - yilokhu? Izibonelo value, ukuchazwa
Emithanjeni Sore emilenzeni: ukuthi benzeni, esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe?